FANOVANA GOVERNEMANTA : Mieritreritra ny hiala mazava ny Praiminisitra | NewsMada
FANOVANA GOVERNEMANTA : Mieritreritra ny hiala mazava ny Praiminisitra
Ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly.
Raha ny fahitana azy amin’izao fotoana izao, indrindra fa ny karazan-dahatsoratra an-gazety manatsara endrika ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, tsy azo lavina intsony fa efa akaiky, tena akaiky, ny fanovana ny governemanta. Teo ihany koa, tato anatin’ny andro vitsivitsy izay, gazety maromaro sy fahitalavitra sasantsasany no efa nanao dokambarotra nanatsarana endrika ity praiminisitra amin’izao fotoana ity. Izany doka izany, izay efa tonga hatramin’ny filazana fa tsy misy afa-tsy ity olona ity irery no afaka mampihatra ny politikan’ny governemanta, tohanan’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Io fomba fanao izay ataon’ny praiminisitra io, toa mamerina indray ao an-tsain’ny vahoaka, ny zavatra toa efa hadino. Isan’izany ny raharaha Ambohimahamasina, izay nahavoatonona ny anarany niaraka tamin’ny an-dRazaimamonjy Claudine mikasika ny fanodinkodinam-bola. Any an-toeran-kafa, ny tranga tahaka ireny dia tokony ho nanaovany fametraham-pialana, saingy eto amintsika, mifikitra mafy amin’ny sezany i Solonandrasana Mahafaly Olivier, amin’ny fiheverany fa efa hadinon’ny olona ireny tranga ireny.
Raha tena manana etika, ny mety indrindra manoloana ny tranga tahaka ireny, ny mametra-pialana ary mametraka ny raharaha eo am-pelatanan’ny fitsarana mba hanamarinan’ireto farany na tena nanao io fanodinkodinam-bola io izy na tsia.
Mieritreritry ny hadio
Ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana ambony eto amintsika, amin’izao fotoana izao, izay efa nanadino tanteraka izany teny hoe « etika » izany. Tsy tahotra tsy henatra mihitsy izy ireo milaza fa « io no olona mendrika ary tokony hapetraka eo amin’io toerana io ».
Manoloana ny fanaovany dokambarotra amin’ny gazety sy haino aman-jery tato anatin’ny andro vitsivitsy, mihevi-tena izy fa « hadio » ao anatin’ity resaka ity raha tsy handalo amin’ny fitsarana, ary raha toa ka tena nanao dia tokony handalo eny amin’ny fonja.
« Tsy misy tokony hiresahana ny hoe manam-pahefana, raha toa ka na ianao aza tsy azo enjehina », hoy ny nambaran’i François Fillon, mialohan’ny nanenjehana ilay vadiny Pénélope. Io filazany io izay tokony hiraikitra an-tsain’ny mpitondra eto amintsika, amin’izao fotoana izao, sy izay mbola maniry hiverina ao anatin’ny governemanta.
Manoloana ilay raharaha fanodinkodinam-bola mitentina 396.492.444 ariary, araka ny fantatra, vola tokony hanaovana « fanampiana manokana » ho an’ny kaominina Ambohimahamasina, izay entina hanatsarana ny birao monisipaly misahana ny fahadiovana (BMH) any amin’ity toerana ity. Io raharaha io, raha ny loharanom-baovao voaray teo anivon’ny Inspection général de l’Etat (IGE) ny volana Aprily 2015. Tamin’izany, inspektera miisa telo no nanao fanadihadiana lalina tany amin’ity toerana ity no nahazo ny fijoroana vavolombelona, izay isan’ny mahavoasaringotra an’i Solonandrasana Mahafaly Olivier, minisitry ny Atitany tamin’izany fotoana, sy Razaimamonjy Claudine, izay olona akaiky ny filoham-pirenena mivady. Tao anatin’ny « note de verification », tamin’ny 29 oktobra 2015, nanao tatitra mikasika ny fanadihadiany tamin’ny firesahany tamin’i Tsabo Pierre, ben’ny Tanànan’Ambohimahamasina, ireto olona telo nanao ny fanadihadiana lalina ireto. Toy izao no resaka :
« Hitako ny nidiran’io vola io tao amin’ny kaonty (ndlr : kaontin’ny kaominina), ny 20 oktobra 2014. Noterena aho avy eo hamindra azy tany amin’ny kaontin’ny olona tsy fantatro akory. Nolaviko izany, saingy nisy ny antso tamin’ny finday nataon’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana (ndlr: Solonandrasana Mahafaly Olivier) izay nilaza tamiko fa raha tiako ny hahazo ny fanamboarana tsena sy fanatsarana ny birao, tsy maintsy hekeko ny baiko, ary misy asa maika tsy maintsy atao any amin’ny kaominin’i Fianarantsoa. Natao ny famindrana ny vola (…) Rehefa nisy ny fivoriana natao teto Antananarivo ny 17 oktobra 2015, naniry ny ampahatsiahy ny minisitra aho mikasika izany, saingy tsy afaka niresaka izahay. Hatramin’izao, tsy mbola nisy na inona na inona natao teto anivon’ny kaominina Ambohimahamasina. Marihiko eto, fa ilay ramatoa Claudine, ilay niantso ahy mba hamindra io vola io, ilay nolaviko. Taorian’izay, Andriamatoa minisitra no nampitandrina ahy hanaja ny baikony”.
Nolaviny izay nolazainy…
Taorian’ny fahazoana io fijoroana vavolombelona io, nampandalovina nanoloana ny filankevi-pamaizana ary nomena sazy ireto inspektera telo ireto.
Vokany, toa nangingina ity resaka ity ary tsy niseho raha tsy ny fampanantsoan’ny teo anivon’ny Bianco an’i Pierre Tsabo tetsy Ambohibao, ny volana novambra lasa teo. Taorian’ny fakana am-bavany azy, natolotra ny « chaine pénal anti-corruption » ity ben’ny Tanàna ity niaraka tamin’ny tale iray teo anivon’ny minisiteran’ny Atitany. “fanodinkodinam-bolam-panjakana, fanaovana hosoka, fanaparam-pahefana”, no isan’ny niampangana azy ireo tamin’izany, saingy nomen’ny fitsarana fahafahana vonjimaika izy roa.
Ho an-dRazaimamonjy Claudine, efa nampanantsoin’ny Bianco indroa nisesy, saingy mbola tsy niseho teny an-toerana mihitsy. Fanalam-baraka kosa indray no nilazan’i Solonandrasana Mahafaly iny zava-nitranga iny, izy izany nitondra mpanao gazety nidina tany Ambohimahamasina lazainy fa hijery ny asa vita. Tamin’izay no nilazan’ny ben’ny Tanànan’Ambohimahamasina fa tsy marina ny filazany izay noraketin’ireo inspektera an-tsoratra. Ny fijoroany vavolombelona anefa tamin’izay, tsy nisy fanerena na kely aza.
Raha tsiahivina, tamin’ny fiantsoan’ny Bianco an’i Pierre Tsabo teto an-drenivohitra, ny volana novambra, tao amin’ny hotely A&C, tetsy Ivato izy no nipetraka tamin’izay. Ity hotely ity izay tsy an’iza fa an-dRazaimamonjy Claudine.